मुसिकोटमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्दै, फोहर ब्यवस्थापन शुल्क बापत मासिक ५०० रुपैँया सम्म तिर्नुपर्ने - Gulminews
मुसिकोटमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्दै, फोहर ब्यवस्थापन शुल्क बापत मासिक ५०० रुपैँया सम्म तिर्नुपर्ने
२०७६ माघ १२, २३:४५
वामी, माघ १२ । मुसिकोट नगरपालिकाको वार्डनं ७ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएको छ । नगरपालिकाको फोहरलाई मोहरमा परिबर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ फोहर प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिका भित्रको फोहर बस्तुलाई बिभिन्न स्थानबाट जम्मागरी सोहि प्रशोधन केन्द्रमा ल्याईने र फोहर बस्तुलाई बर्गिकरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कुहिने र नकुहिने बस्तुहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने र कुहिने बस्तुहरूबाट प्रांगारिक मल बनाईने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै नकुहिने बस्तुहरूलाई राम्रोसंग ब्यबस्थापन गरी बिक्रि हुने स्थानहरूमा पठाईने वा पुन:प्रयोग गरिने मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताए । मेयर सापकोटाका अनुसार नगरपालिकाको आफ्नो डम्पिङसाईट नहुँदा यस कार्यका लागि करिब दश रोपनी जग्गा दश बर्षको लागि बार्षिक प्रति रोपनी सात हजार रुपैँयाको दरमा भाडामा लिईएको छ ।
मेयर सापकोटाका अनुसार तत्काल प्रयोगमा आऊने गरी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाईएको छ । सापकोटाका अनुसार वस्थापन र विसर्जन बारे पनि सचेतना प्रदान गरिने छ भने घर, सडक तथा आसपासमा गरिएको अव्यवस्थित कार्यलाई रोक्न प्रेरित समेत गरिने छ । नगर क्षेत्रको सरसफाई गर्नु सम्पूर्ण नगरवासीको सामुहिक दायित्व भएकोले यही जागरण नगरवासीमा जगाउन आफूहरू लागिपरेको नगरपालिले बताएको छ । मेयर सापकोटाले आफ्नो घर पसल वरपर, छरछिमेक र सार्वजनिक स्थानको सरसफाई सबैको सामुहिक प्रयासले मात्र पुरा हुने बताए ।
“केहि समय अगाडि नगरपालिकाको तर्फबाट हामीहरू फोहर ब्यबस्थापन सम्बन्धी स्थानीय सरकारहरूको अनुभब अध्यन गर्न बिभिन्न स्थानमा पुगी फर्केका छौ”, मुसिकोट नगरपालिका आर्थिक संयोजक प्रकाश काफ्लेले भने, “ति अनुभबहरूलाई हाम्रो नगरपालिका भित्रको फोहरको उचित ब्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने छौँ ।” तिब्र बजारिकरणको प्रभाबमा परेको वामीटक्सार बजारको लामो समय पहिले देखिको समस्या फोहरमैला ब्यबस्थापनको लागि नगरपालिकाको यस निर्णयले समाधान हुने संयोजक काफ्लेको तर्क छ ।
काम कती भयो? खर्च कती भयो ?
हाल सम्म निर्माणाधिन फोहर प्रशोधन केन्द्रमा जग्गा सम्याउने, ट्रस बनाऊने, खाडल खन्ने आदि लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरिसकिएको छ । यस कार्यका लागि गत बर्ष पन्ध्र लाख रुपैँया र यस बर्ष दश लाख रुपैँया गरी पच्चिस लाख रुपैँया खर्च भईसकेको आर्थिक संयोजक काफ्लेले बताए ।
आफुहरूले फोहर संकलनका लागि दुई वटा ट्याक्टर खरिद गरिसकेको र प्रत्येक हप्ताको आईतबार बजार क्षेत्रको घरहरूबाट फोहर संकलन कार्य शुरू गरिएको बन बाताबरण तथा फोहरमैला ब्यबस्थापन समिति मुनपा ५-९ का अध्यक्ष गोपिकृस्ण खरेलले बताए ।अध्यक्ष खरेलका अनुसार फोहर मैला ब्यबस्थापनका लागि नगरपालिकाको अनुदानमा चालिस लाख रुपैँया पर्ने दुई वटा ट्याक्टरहरू ल्याई सकिएको बताए ।अध्यक्ष खरेलका अनुसार नगरपालिकाको वार्ड नं ५-९सम्म काम गर्ने गरी समितिको निर्माण गरिएको छ । सडकमा पानी छ्याप्ने काम पनि शुरू गरिएको खरेलले बताऊनुभयो । समितिको कार्य प्रगतिबारे प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष खरेलले हाल सम्म करिब ३०० सदस्यहरूलाई कार्ड बितरण गरिएको छ । रातो, निलो र पहेलो । मासिक रूपमा फोहरमैला ब्यबस्थापन शुल्क स्वरूप प्रत्येक सदस्यहरूले क्रमश रातो, निलो र पहेँलो कार्ड प्राप्त गरेका सदस्यहरूबाट मासिक रूपमा ५००, १०० र ५० रुपैँया उठाऊने गरिएको बताए ।